Shirkii Hadaaftimo oo Fashilmay
Friday January 20, 2017 - 04:04:45 in Wararka by Super Admin
Mareegta GalgalaNews waxay ahayd Bogii ugu horeeyay ee Banaanka keenay in Somaliland doonayso inay Shir ku qabato Degmada Hadaaftimo. Markii warkaasi Wargayska ku soo baxay waxa durba la soo xidhiidhay maamulka Bogga Madaxda Somaliland oo uu ugu h
Mareegta GalgalaNews waxay ahayd Bogii ugu horeeyay ee Banaanka keenay in Somaliland doonayso inay Shir ku qabato Degmada Hadaaftimo. Markii warkaasi Wargayska ku soo baxay waxa durba la soo xidhiidhay maamulka Bogga Madaxda Somaliland oo uu ugu horeeyo Wasiirka W.Gaashaandhiga Axmed Xaaji Cali Cadami oo qiray inuu Shirkaasi Jiro.
Hase ahaatee sida laga soo xigtay Masuulka Somaliland u qaabilsan Badhan Cabdixakiin Wahaabi ayaa qiray inuu Shirkaasi baaqday isla markaana aan wakhtigan Shir lagu qabanayn Magaalada Hadaaftimo. Akhri Maqaalkii Hore ee aan Baahinay